Cadaawadda Real Madrid & Atletico Madrid oo xitaa gaartay xulka qaranka France, arag wuxuu sameeyay Griezmann. - Hablaha Media Network
Cadaawadda Real Madrid & Atletico Madrid oo xitaa gaartay xulka qaranka France, arag wuxuu sameeyay Griezmann.
HMN:- Cadaawadda Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa lugaha la gashay xulka qaranka France kadib markii Antoine Greizmann uu diiday inuu salaamo sidoo kalana u sacab tumo da’yarka qaranka Raphael Varane.
Daafacaan heerka caalami ayaa kusoo guuleystay Champions League laba maalmood ka hor markii ay Cardiff ku xasuuqeen Juventus, waxeyna u aheyd midkii sadexaad oo uu la hanto Real Madrid waayahiisa.
Si kastaba tababaraha 48-jirka ah ee xulka qaranka Didier Dechamps ayaa ku dhiirigaliyay xidigaha xulka iney salaan kusoo dhaweeyaan sidoo kalana u sacab tumaan xidiga, balse Antoine Greizmann ayaa la arkayay inuusan wax sacab ah tumin.
Xifaaltanka Madrid ayaa lugaha lasoo galay qaranka France tiiyoo ay jirto in Varane uu semi final-ka Champions League ku reebay Griezmann.